Dhirivhari Yemutemo - JOOPZY
Huge Sales! Coupon: "blackfriday2020"
Galaxy Projector 1 × $89.95
Mazuva makumi matatu ekugutsikana garandi neMari Kudzoka Kana iwe usingagutsikane nezvigadzirwa zvako tinoburitsa mari yakakwana, hapana mibvunzo yakabvunzwa.
Kupfuura kubudirira 28.775 yakatumirwa mirairo Isu takaita vatengi vazhinji vakafara sekuraira kwakawanda kwatakatumira. Iwe unongofanira kubatana nemhuri yedu yakakura.
Yedu yese mirairo iri kutumirwa kubva kuChina. Isu takaita vatengi vazhinji vakafara sekuraira kwakawanda kwatakatumira. Iwe unongofanira kubatana nemhuri yedu yakakura.
Isu tinotumira kune nyika zhinji pasi rese, kune ese epamba uye epasi rese mapakeji. Kunyange isu tichiedza kuendesa zvinhu munguva yakatarwa isu tinotsanangura, hatingakwanise kuvimbisa kana kubvuma mhosva yekuzvitakura kunoitwa kunze kwechino nguva. Sezvo isu tichivimba nemakambani echitatu ekutakura vanhu kuti vatifambise vatengi vedu vatinunure, hatigone kubvuma mutoro wekubuda muhomwe mari kana mimwe mari yakawanikwa nekuda kwekutakura kana kunonoka kuendesa.
Yese mirairo inotora inenge 3-5 business days process. Nguva yedu yekutumira inowanzove iri mukati 7-10 business days kuenda kuUSA, uye 12-15 business days kune dzimwe nyika. Nekudaro, zvinogona kutora mazuva makumi maviri emabhizimusi kuti usvike zvichienderana neyako uye kuti zvinotora nguva yakareba sei kusvika tsika. Nomutsa ziva kuti nguva yekutumira ichave yakasiyana panguva yekuzorora kana kushomedzerwa kushambadzira edition.
Isu hatisi mvumo yekutakura iyo inokanganiswa netsika, zviitiko zvechisikigo, kuwedzerwa kubva kuUSPS kuenda kune anotakura emuno munyika mako kana kurovera nendege nepasi kana kunonoka, kana chero imwe mari yekuwedzera, yetsika kana yekumashure yekupedzisira mhosva yawanikwa.
INOKOSHA: Yedu yese mirairo iri kutumirwa kubva kuChina uye isu hatitore mutoro kune chero mhando yechirwere.
Cherechedza 1: Isu hatisi mhaka kana phukusi isinga shandiswe nekuda kwekushomeka, isina kukwana kana isiriyo ruzivo rwokuenda. Ndokumbira utore iyo chaiyo yekutumira zvinyorwa kana uchibuda. Kana iwe uchiziva kuti iwe wakanganisa pane yako yekutumira ruzivo, neme-e-mail tinotumira kune [email inodzivirirwa] kukurumidza kukuru.
Cherechedza 2 : Nyika dzese dzine chikumbiriso chemutero: iyo huwandu hwomunhu anotanga kubhadhara mutero pane chinhu chakatorwa. Mitero nemabasa zvinosiyana pazvinhu zvese munyika dzese uye zvinofanirwa kubhadharwa nemutengi.
Vatengi vanobvumidzwa kuita shanduko kumirairo yakaiswa, widin 24 maawa nezvekutenga kwavo uye pamberi mirairo inozadziswa. Mamwe maheji achaiswa nevatengi pane chero shanduko dzinoitwa kumirairo pashure 24 maawa nezvekutenga kwavo.
Vatengi havabvumidzwe kudzima zvavanotenga mushure mekurairwa kuiswa.
Iwe unofanirwa kukumbira kudzoka mukati 14 mazuva ekugamuchira yako odha.
Maitiro ekudzosera chinhu:
1. Ita shuwa kuti inosangana nemaitiro ekudzoka anoshanda
2. Titumire meseji pa [email inodzivirirwa] kuratidza chinangwa chekudzosera chinhu. Ndokumbirawo ubatanidze zvinotevera mune email:
• Mufananidzo / vhidhiyo yechinhu ichi zvichienderana nechinhu chacho
• Matagi uye zvinyorwa zvakabatanidzwa
Isu tichakupindura pazuva rebhizinesi mukati 24 maawa uye kukubatsira mukugadzirisa kudzoka kwechinhu chakatengwa.
Kana chikumbiro chako chekudzoka chikagamuchirwa, unofanirwa kudzosa chinhu (icho) mukati 7 mazuva.
Ndokumbirawo muve nechokwadi chekuti kana muri kudzorera zvigadzirwa (zvigadzirwa), zvinofanirwa kunge zviri mumamiriro akanaka, zvisina kushandiswa, zvisina kugezwa uye neyavo kuputira kwepakutanga (kana zviripo)
• Mutengi ndiye ane basa rekudzosa mari yekutumira
• Chekutanga mari yekutumira haizodzoreredzwe
Tichangogamuchira chinhu icho-chakatumirwa mamiriro, isu tinokudzosera iwe mutengo wekutenga uye kukuzivisa iwe kuburikidza neemail.
BATSIRA KUSVIRA ZVESE
Kudzoka kwako kunogona kubvumirwa chete zvichikonzerwa nezvikonzero zvinotevera:
Zvinangwa zvezvikonzero Kukuvadzwa Icho chigadzirwa chakakuvadzwa mukutakura
Kuremara Chigadzirwa hachishande sekutsanangurwa kwachaitwa mugadziri wawo
Chinhu chisina kunaka / chisina kunaka Kwete icho chigadzirwa chakarairwa nemutengi (semuenzaniso saizi yakaipa kana kuti ruvara rusina kunaka)
Zvinhu zvisipo / zvikamu Kushaikwa zvinhu / zvikamu sezvakaratidzwa mupakeji
Hazvina kukodzera * Mutengi anogashira saizi yakarairwa asi haina kukodzera *
Webhusaiti kukanganisa Chigadzirwa chacho hachifanane nemafungiro ewebhusaiti, tsananguro, kana chifananidzo (nyaya iyi inokoshesa webhusaiti kukanganisa / zvisizvo)
DZOKUDZIDZA & DZIDZA
Yedu 7-ZUVA MARI KUSVIRA GUARANTEE
Inot.com inovimbisa kuti chero chinhu chakatengwa kubva kwatiri chinodzoserwa mukati 7 mazuva ebhizinesi, kutumira-kutenga mari-yekudzosera garandi.
Kana iwe uchikodzera kupihwa mari yekudzosera zvinoenderana nezvikonzero zvekudzoreredza zvataurwa pamusoro, unogona kukumbira kudzoserwa mu "Akaunti Yangu> Orders”Kana unogona kushandisa chinongedzo chakapihwa pazasi:
Sarudza chinhu kana odha yacho yese wobva wadzvanya pa "kukumbira kudzoserwa”Bhatani. Tiudze kuti iwe unoda kudzoreredzwa, iine tsananguro yakajeka yekuti sei usingagutsikane nekutakura uye kurodha mifananidzo kana chero chimwe chinhu chinotsigira. Tinoda kuziva kuti zvinhu zvakanganisika papi kana kuti tingaite sei kuvandudza kugutsikana kwevatengi uye ruzivo rwebasa. Nyaya yega yega ichaongororwa mukati 1-2 mazuva ebhizinesi. Nekudaro, mutengi anogashira email, kana mutengi akakodzera kudzorerwa, ipapo kudzoserwa kunozoitika zvichienderana negwaro redu rekudzosera rakataurwa pasi apa.
NGUVA YEMHARA KUTI Uwane YAKO REPLACEMENT / KUDZIDZIRA
Chinzvimbo chekutsiva: kana chimwe chinhu chapera maitiro ekuongororwa kwemhando, tarisira kugashira chinhu icho mukati 10-15 mazuva ebhizinesi kubva pazuva ratinogashira ratidziro yeruzivo rwechinhu chakadzoserwa.
Refund sarudzo: vatengi vakumbira kuti vadzore mari vanogona kutarisira kuigamuchira mukati meinotevera nguva mafomati:
Nzira yekubhadhara (panguva yekutenga) Dzosera Sarudzo Dzorera Nguva Yokutungamira (kuti uone iyo huwandu pane chako chirevo chebhangi)
Kadhi rechikwereti / Debit Kadhi Chikwereti / Debit Reversal
Paypal Kubhadhara Paypal (kana Paypal chiyero) 5-7 bhizimisi mazuva
Kudzoreredzwa kwezvikwereti (kana Paypal yakabatana nekadhi rechikwereti) Mazuva mashanu kusvika gumi nemashanu ekubhangi
Ongorora: Mari yacho inogona kuratidzwa mudhidhi yako inotevera yekubhadhara
Debit kudzokorora (kana Paypal yakabatana nekadhi rekubhengi) Mazuva mashanu kusvika makumi matatu ebhengi mazuva (Zvinoenderana nebhangi rako rekupa)
A password ichaendeswa kune email yako kero.